NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း တပ်ချုပ် ပြောကြား
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် (NCA ) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiangနှင့် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးစဉ် တပ်ချုပ်က ယင်းသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
NCA မှ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကနဦးခြေလှမ်းဖြစ်ရာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲပြီးမှသာ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးတွင် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဖြင့် ရှေ့ဆက်သွားမရသည့်အတွက်ကြောင့် NCA ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်မှာ ကနဦးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အစိုးရလက်ထက်က ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ NCA ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ရှစ်ဖွဲ့သာ ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး မဖြစ်မနေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သေးကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiangက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ကောင်းမွန်သည့် အလားအလာများရှိနေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် ပိုမို နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တအာင်း အဖွဲ့ (TNLA)မှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဗိုလ်မှူး တာအိုက်ကျော်က “ကျွန်တော်တို့ မြောက်ပိုင်း ခုနစ်ဖွဲ့က ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ NCA လမ်းကြောင်းဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ သွားဖို့ ပြောထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တအာင်းအနေနဲ့လည်း မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ အတိုင်းပါပဲ”ဟု ဆိုသည်။
NCA လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည်မှာ ယခုအခါ နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီးဖြစ်သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရုပ်လုံးပေါ်လာခြင်း မရှိသည့်အပြင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်သည့် RCSS အဖွဲ့များနှင့်လည်း နှစ်ဖက်ထိတွေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများတွေ့ရှိနေရကြောင်း ၎င်းက ဝေဖန်သုံးသပ်သည်။
လက်မှတ်ထိုးရန် ကျန်ရှိသည့် မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင် ခုနစ်ဖွဲ့တွင် ‘ဝ’ အဖွဲ့ (UWSA)၊ မိုင်းလားအဖွဲ့ (NDAA)၊ ကချင်အဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းအဖွဲ့ (SSPP)၊တအာင်းအဖွဲ့ (TNLA)၊ ကိုးကန့်အဖွဲ့(MNDAA)နှင့် ရခိုင်အဖွဲ့(AA) တို့သည် မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်တွင် အခြေချသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိသည့် UNFC အဖွဲ့အစည်းတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုး တက်ရေးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး (LDU)နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားကောင် စီ (ANC)တို့လည်း ပါဝင်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးပန်းဦးလွှတ်သူ ခွန်တန် (ခေါ်) ဇာတ်လိုက်ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးသွားမည်ဟု မွန်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးလွှတ်တော်၌ ငွေကျပ် သုံးသိန်းတောင်းသည့် ဦးစီးမှူးကို ရာထူးလျှော့၍ နယ်ပြောင်းအရေးယူ